Usefuna nokuphisana ngendodakazi okhungethwe wusizi | News24
Usefuna nokuphisana ngendodakazi okhungethwe wusizi
Cape Town – Umama wase-Old Crossroads uthwele kanzima ekukhuliseni izingane zakhe ezintathu, ezimbili kuzona ezikhubazekile, kanti usefuna ukuphisana ngendodakazi yakhe eyodwa, kubika iGroundUp.
Lo mama, uNomahlubi Mbulu, 48, ozikhulisela yedwa izingane zakhe ucwila ezikweletini futhi ongakakwazi nokunakekela kahle uSibusiso Keyisi,20, noLilitha Keyisi, 13, utshele odokotela baseLentegeur Hospital ukuthi akafuni bambuyise uLilitha ngoba ngeke akwazi ukumnakekela.
ULilitha waqala ukubanesifo sokuwa enezinyanga ezingu-8 ezelwe. Kwatholakala ukuthi unalesi sifo kanye ne-autism.
Ngesikhathi abeGroundUp bavakashela lo mama emzini wakhe bathole isimo singesihle, iphunga belivale emnyango, indle ingcwele phansi.
Funda nalolu daba: Usesimeni esibucayi onqunywe amankwahla wakhishwa namehlo
UMbulu uthi abezombusazwe, yizinhlangano ezizimele, uhulumeni wesifundazwe kanye nosonhlaklahlake sebekebafika kuyena bathembisa ngokumsiza kodwa namanje akukho abasakwenzile.
Uthi ubaba wezingane zakhe uhlala eduze komuzi wakhe kodwa yena nomndeni wakhe abazihluphi ngezingane.
Enye indodakazi yakhe, eneminyaka engu-17 ubudala, yenza umatikuletsheni kulo nyaka.
Ephendula imibuzo yeGroundUp, okhulumela uNgqongqoshe woMnyango wekuthuthukiswa koMphakathi u-Albert Fritz, Sihle Ngobese, uthe uMnyango uyazi ngalolu daba futhi kukhona okwenzayo ngokusebenzisana noMnyango wezempilo.